[Sunday, September 3rd, 17] :: Al-Shabaab oo weerartay Buulo-Guduud
Kismaayo (RH) Ururka Al-Shabaab ayaa saaka waaberigii weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ku lee yihiin deeganka Buulo-guduud oo qiyaastii 30km dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo ee xarrunta gobalka Jubbada Hoose.
Dadka deeganka ayaa sheegay in weerarka uu ku billowday baabuur lagu qarxiyey albaabka horre ee sadhigga dabadeedna waxaa xigay ciidamo lugta oo galay oo ka tirsan Al-Shabaab.
Inta la ogyahay 18 ka tirsan ciidamada Jubbaland iyo kuwa Soomaaliya ayaa ku dhintay weerarka tiro intaas ka baddana waa ay ku dhaawacmeyn balse Al-Shabaab ayaa sheegay illaa 30 askari ay ku dileen weerarka Buulo-guduud.
Dadka deeganka ayaa sheegay in maqleen qarax xooggan iyo dagaal toos ah oo ka dhacaya xerada, sidoo kale warar ayaa sheegaya in Al-Shabaab ka wareen saldhigga gaadidka dagaalka iyo hub oo ay la aadeen dhinaca iyo magaalada Jilib ee gobalka Jubbada Dhexe.
Waxaa kaloo jira warar sheegaya in ciidamo gurmad ah oo ku soo wajahnaa Buulo-guduud in wadadda loola galay oo la qarxiyey.
Buulo-guduud waa saldhigga ugu weyn ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa Soomaaiya ee deegannada duleedka Kismaayo.
Saaxafadda ayaa loo diiday in lala wadaago weerarka ka dhacay Buulo-guduud, waxaana xaalad kacsanaan laga dareemayaa magaalada Kismaayo.
Weerarka Buulo-guduud ayaa la sheegay in uu la mid ahaa weeraradii ka dhacay Ceel-Cadde, Janaale iyo Leego oo lagu weerarray ciidamada Kenya, Burundi iyo kuwa Uganda ee ka tirsan AMISOM.
Weli maamulka Jubbaland kama hadlin weerarka ka dhacay Buulo-Guduud.
posted on Sunday, September 3rd, 17